Madaxa xuquuqul insaanka QM oo Itoobiya booqanaya, kalana hadlya Tacadiyada ka dhacaya dalkaasi – Balcad.com Teyteyleey
Madaxa xuquuqul insaanka QM oo Itoobiya booqanaya, kalana hadlya Tacadiyada ka dhacaya dalkaasi
Zeid Racad Al Xuseyn Madaxa xuquuqda aadanaha ee QM ayaa todobaadkan booqan doona Itoobiya, kadib markii ay xukuumaddu casuntay. sidaa waxaa lagu sheegay qoraal xafiiskiisa ka soo baxay.
Socdaalka Zeid Racad Al Xuseyn ayaa ku soo aadaya todobaad kadib markii Ra’iisul wasaare Hailemariam Desalegn uu ku gacan sayray baaqyo sheegayey in baareyaal madax banaan loo ogolaado inay eegaan jawaabtii ay ciidanka amnigu ka bixiyeen mudaaharaadyadii xukuumadda looga soo hor jeeday ee boqolaalka qof ay ku dhinteen.
Madaxa xuquuqda aadanaha ee QM Al Xuseyn ayaa isaga ku baaqay baaritaan madax banaan, laakinse weli ma cadda in safarkiisa uu dhabbaha u xaari doono in baareyaal Qaramada Midoobay ka socda loo ogolaado inay halkaa tagaan.
Dhanka kale qoraalka Madaxa xuquuqda aadanaha ee QM We offer the best ventolin solutions you can find on the market today! Buy your ventolin only for 30.26 USD now! ayaa lagu sheegay inuu la kulmi doono ra’iisul wasaaraha, oo uu kala hadli doono xaaladda xuquuqda aadanaha ee Itoobiya, iyadoo todobaadyo ka hor ayaa guddiga xuquuqda aadanaha ee u janjeera dhanka xukuumadda Itoobiya wuxuu soo saaray warbixin sheegaysa in 669 qof oo 63 ka mid ah ay Boolis ahaayeen ay ku dhinteen mudaaharaadyadii billowday November 2015.
Ma Ducaysana Xulka Soomaliya, Mana Mudna in Taagre Loo noqdo, Hadiiba ay South Sudan Ka soo soo badisay?
Ciidamo Itoobiyaan ah oo saakay weerar Gaadmo ah lagu qaaday iyagoo marayay Deegaano ka mid ah Degmada Buur Hakaba.